अन्तिम बरफ युग र कसरी मानिस अमेरिकामा आए | नेटवर्क मौसम विज्ञान
अन्तिम बरफ युग र कसरी मानिस अमेरिकामा आए
दुर्भाग्यवस, हामी जलवायु परिवर्तनको नतीजा हेर्नका लागि प्रयोग भएका छौं। एक बढ्दो तातो विश्व र तापमानमा क्रमिक र निरन्तर वृद्धिको परिणामहरू। धेरै चीजहरू जुन हामी पनि आज भइरहेको देख्छौं, पहिले जस्तो थिएन। हाम्रो घर, ग्रह पृथ्वी, तातो र हिमनदीको चक्र भएको छ। मानव इतिहास हामीलाई लामो हिउँ युग अनुभव गर्न को लागी लामो छ। जसले विश्वव्यापी रूपमा हाम्रो जनसांख्यिकीय विस्तारमा पनि हाम्रो ईतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। ती माइलस्टोन मध्ये एक हो निस्सन्देह अमेरिकी महादेशमा मानिसहरुको आगमन।
र त्यो हो मानिसहरु अमेरिकामा कसरी आए भन्ने धेरै सिद्धान्तहरु छन्। ती सबै मध्ये, सब भन्दा प्रशंसनीय र प्रमाणित हो कि तिनीहरू "बेरिंगिया ब्रिज" पार गरे। केवल Beringia को रूपमा पनि चिनिन्छ। छविमा सम्पूर्ण रातो सर्कलले ro०,००० वर्ष पहिले उत्पन्न भएको म्याक्रो पुललाई स indicates्केत गर्दछ। यो हिसाब छ कि मानव यो २०,००० वर्ष अगाडि हिँड्न सक्दछ, जबकि समुद्री सतह १२० मिटर तल झरेको थियो।
1 हाम्रो ग्रह कस्तो थियो त?
2 बरफ युग को अन्त
3 प्यालेओक्लिमाटोलजी। आइस प्रविधि र रहस्य
3.3 स्थिर आइसोटोपहरू
हाम्रो ग्रह कस्तो थियो त?
बेरिंगिया ब्रिज अवस्थित भएको ठाउँमा बेरिंग सागरको गुगल नक्शाबाट लिइएको तस्विर
बरफ एक ठूलो क्षेत्र कभर। वर्तमान औसत भन्दा करिब तीन गुणा बढी। हाम्रो ग्रहको औसत तापमान १º डिग्री सेन्टिग्रेडको औसत औसत भन्दा १० डिग्री सेन्टिग्रेड कम थियो। बेरिंगिया ब्रिज, जुन रातो घेराको साथ चिह्नित अंश हो, दुबै महाद्वीपहरू पार गर्ने माध्यम बनायो। बरफ युग को अवधिमा, समुद्र तल खस्छ। बदलेमा, तरल ठोस भएका क्षेत्रहरू। जस्तो हामीले टिप्पणी गरेका छौं, हिमनदीहरु धेरै विस्तृत थियो। र घुमन्ते सभ्यताको लागि, यो नयाँ संसारको प्रवेशद्वार थियो।
तिनीहरू उत्तरपूर्व एशिया हुँदै वर्तमान रूसले बेरिंगिया ब्रिजबाट हुँदै वर्तमान बेरिंग सागर भएर अमेरिकी उत्तरपश्चिम, वर्तमान अलास्कामा पुगे। हाम्रा पुर्खाहरूले भाँडा भेट्टाए, उनीहरूको संस्कृतिको विशिष्ट। उही समान भाँडा, उही उपयोगिताको लागि, काटियो र समान तरिकाले बनाईयो।
बरफ युग को अन्त
5.000,००० वर्ष पछि, करीव १ 15.000,००० वर्ष पहिले, बरफ युग अन्त्य भयो। अचानक १,। बर्षमा तापक्रम बढ्यो। Paleoclimatologists को रेकर्ड अनुसार, जो उल्लेखनीय दक्षता संग हिउँ मा पछिल्लो १२,1,००० बर्षको मौसम मा परिवर्तन अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै एक तरीकाले CO2 को उदारीकरणको कारण अन्टार्कटिकामा भण्डार गरिएको थियो, भर्खरको अध्ययन र अनुसन्धान शो को रूप मा। बार्सिलोना पर्यावरण विज्ञान र टेक्नोलोजी इंस्टिट्यूटले उत्तरार्द्धमा भाग लिएको छ।
यो ग्रह आफैले पुन: स्थापना गर्न शुरू गरे। उत्तरजीवीको खोजीमा हाम्रो नम्र घुमन्तेहरू, उत्तरदेखि दक्षिण अमेरिका सम्म हिड्दै छन्। हिमनदीहरू डुde्गामा डुब्न थाले, समुद्री सतह फेरि बढ्दै गयो र त्यसको साथमा ती दुवै महादेशहरू त्यसपछिकादेखि नै बन्द गरिएका थिए। केवल थोरै भन्दा ago०० वर्ष अघि, र आधिकारिक रूपमा, दुबै सभ्यताहरू फेरि भेट्न जाँदै थिए, विभिन्न तरिकामा विकास भएको।
प्यालेओक्लिमाटोलजी। आइस प्रविधि र रहस्य
वैज्ञानिकहरू आइस विश्लेषण गर्दै
प्यालेओक्लिमाटोलोजिष्टहरू प्रयोग गर्छन् paleocliates घटाउन बिभिन्न तरिकाहरू। उदाहरणका लागि, तलछट सामग्री, जहाँ चट्टान वा जीवाश्मयुक्त तलछटहरूको रसायनबाट जन्तु, वनस्पति, प्लान्कटन, परागकण घटाउन ... अर्को प्रविधि डेन्ड्रोक्लीमैटोलोजी हुनेछ, जहाँ पेट्रफिफाईड रूखहरूको घाउबाट जानकारी निकालिन्छ। कोरलहरू समुद्रमा रहेको सतह सतहको Tº हेर्नका लागि। तलछट अनुहारहरू जहाँ समुद्री सतह झल्काउन सकिन्छ, ठूलो paleoclimatic परिवर्तनहरू देखाउदै। र बरफको मामलामा, प्राय: जसो प्रयोग हुने गर्दछ:
बरफको पानाहरू बीच र बर्ष बर्ष संकुचित भएको बीचमा हामी प्यालेपोलेन पाउन सक्छौं। यसले ती बर्षको बगैंचामा त्यहाँ के वनस्पतिहरू थिए भनेर अनुमान गर्न अनुमति दिन्छयसमा पनि ज्वालामुखी विस्फोटबाट खरानी छ।
माइक्रोबुल्सको रूपमा फस्ने हावाका कारण जानकारीको जन्मजात स्रोत हो यसको संरचना जसले त्यस समयको वातावरण कस्तो प्रकारको थियो भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ.
पानीको वाष्पीकरण द्वारा, र स्थिर आइसोटोपमा केही फरक छ जुन हाइड्रोजन र अक्सिजन भन्दा कम तौलको कारण बरफमा भण्डार गरिएको छ, विभिन्न अवधिहरू बीच सहवासहरू फेला परेका छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » अन्तिम बरफ युग र कसरी मानिस अमेरिकामा आए
कछुवाहरू जलवायु परिवर्तनको कारण क्याटालोनियाको तटमा आइपुगेका छन्
शताब्दीको अन्त्यसम्म अन्टार्कटिका २ 25% कम बर्फबिना छोडियो